ku saabsan DAYA
ST-taxanaha Farsamada Farsamada
STA-taxanaha Farsamada Farsamada
STC-taxanaha Farsamada Farsamada
STE-taxanaha Farsamada Farsamada
Saxaafadda Mechanical Frame
Meegaarka C -Press Press Mechanical Press (Taxanaha ST)
Miisaanka C -ga Meesha Fudud ee Farsamada (taxanaha STX)
Meegaarka C ee Saxaafadda Mechanical Double (Taxanaha STC)
Saxaafadda Mechanical Frame Frame
Qaab -dhismeedka adag ee Saxaafadda Mechanical Press (Taxanaha STD)
Jir -adag adag Press Press Mechanical Double (Taxanaha STE)
Madxafka Farshaxan ee Toosan (Taxanaha STF)
Semi -xiran Hal -riix riixitaan (Taxanaha STB)
Saxaafadda Adeegga Dhinac Toosan (taxanaha STP)
Cadaadiska Xawaaraha Sare ee J (taxanaha C)
Dhinaca Toosan ee Saxaafadda Xawaaraha Sare
Dhinaca Tooska ah ee Shanta Wareeg ee Tusaha Tiirka Saxaafadda (taxanaha HS)
Saxaafadda Xawaaraha Sare ee Toosan (Taxanaha EL)
Garaaca Toosan ee Xawaaraha Sare ee stator Motor iyo rotor (taxanaha HHD)
Toggle Joint Press High Speed ​​(taxane degdeg ah)
Hoos u jiid Saxaafadda Xawaaraha Sare (taxanaha HX)
Afar robots dhidibka
Lix robots dhidibka
Darawalka Hawada Hawada
Tube Tuubada Hawada
Aaladaha Goynta Xardha Pneumatic
Saameynta Saameynta Pneumatic Wrench Ratchet Wrench
Qoryaha Cidiyaha Pneumatic Rivet Gun Tool
Sander Pneumatic ah
Qalabka Ka saarista miridhku Baaskiil Pneumatic
Qalabka Qoryaha Pneumatic
la xiriir DAYA
Cilladaha caadiga ah iyo hababka xallinta mashiinka saxaafadda
Mashiin kasta wuxuu la kulmi doonaa ciladaha mashiinka inta la isticmaalayo. Haddii aad rabto inaad xalliso ciladaha mashiinka, waa inaad marka hore fahanto sababta qaladka oo aad khaladka u baabi'isaa si waafaqsan. Kuwa soo socda ayaa ah cilado caadi ah iyo hababka xallinta dhibaatooyinka ee la kulmay intii lagu jiray hawlgalka ...
Tilmaamaha Mashiinka Mashiinka Farsamada ee Shiinaha
C Frame Single Crank (ST Series) Madbacadaha Saxda Sare Macaamiisha sharafta leh: Hello, waad ku mahadsan tahay isticmaalkaaga DAYA Press! Shirkadeena waxay ku takhasustay soo saarista nooc kasta oo makiinado ah. Kahor intaadan ka tegin warshadda, mashiinka waxaa loo soo saaray si buuxda iyadoo la raacayo shahaadada tayada caalamiga ah ee oper ...
Mashiinka saxaafadda xawaaraha sare
Mashiinka saxaafadda ee xawaaraha sare leh feeraha xawaaraha sare leh (saxaafadda xawaaraha sare leh) waa isku-darka birta kabka ah ee isku-dhafan oo leh adkeyn sare iyo iska-caabbinta naxdinta leh. Shimbirraha waxaa loogu talagalay waddo hage oo dheer waxaana lagu qalabeeyay aalad dheel dheel dheel si loo hubiyo hawlgal sax ah oo deggan. Dhammaan ka-hortagga duugga ...
Birta Gurdanka CHINA
DHINTA BIRTA CHINA Maaddaama ay soo saarayaasha qaybo shaabadaynta birta CHINA, Kooxda Ge-Shen waxay bixisaa adeegyadda biraha shaabadaynta CHINA waxayna siisaa qaybo shaabadaysan oo bir ah, iyagoo hubinaya tayo sare leh. Iyada oo taageero ka heleysa tikniyoolajiyadda casriga ah iyo khubaro khabiir ah, waxaan u beddeleynaa gariiradda birta qaybo bir ah f ...
Kala soocidda birta aan saliida lahayn
Kala soocidda birta aan birta lahayn: Roobabku wuxuu adkaynayaa birta birta ah oo leh qaab-dhismeed wanaagsan iyo alxanka wanaagsan, waxaa loo adeegsan karaa sidii qalab aad u sarreeya oo ku jira warshadaha nukliyeerka, duulista iyo warshadaha hawada. Waxaa loo qaybin karaa nidaamka CR (400 Series), Cr Ni system (300 Series), Cr ...
Sida loo doorto feerka saxda ah ee loogu talagalay qaybaha shaabadaynta
Wax -soo -saarku wuxuu u baahan yahay inuu ku tiirsanaado feer (riix) si uu u bixiyo awood, cabbirka dhinta oo kala duwan, nooca dhismuhu wuxuu u baahan yahay inuu doorto feer kala duwan si uu u dhigmo. Xulashada macquulka ah ee feeraha ayaa yarayn karta qarashka iyo kaydinta kheyraadka. Heerka ugu weyn ee feerka xulashada dhinta waxaa lagu cabiraa tonnage, oo inta badan la helo ...
Soo saarayaasha saxaafada ee waaweyn si aad u lafa guraan habka hawlgalkiisa
Soo saarayaasha saxaafada ee waaweyn si aad u lafa gurtaan sida loo sameeyo dalabka suuqeena si loo daboolo? Dusha meelaynta ee qodobka meelaynta ee saxaafadda weyn baa leh gunno, oo dusha meelaynta ayaa si fiican dhulka loo dhigi karaa ka dib marka qalabka la rakibo. Habkan waxaa loo ansixiyay suppo ...
Shan hab -samaynta biraha caadiga ah
Birta xaashida (badiyaa birta ama aluminium) ayaa kaalin muhiim ah ka qaadata dhismaha iyo wax -soo -saarka. Warshadaha dhismaha, waxaa loo adeegsadaa dhisme iyo qolof ama saqaf; warshadaha wax -soo -saarka, biraha xaashida waxaa loo adeegsadaa qaybaha baabuurta, mashiinnada culus, iwm.
Wargeyskeena Todobaadlaha ah
Qof kasta oo ka fikiraya shirkadeena iyo badeecadeena,
fadlan nala soo xiriir annaga oo noo soo diraya emayl ama si deg deg ah nala soo xiriir.
Cinwaanka:NO.17, Wadada Xingzhou, Magaalada Qianzhou, Magaalada Wuxi, Gobolka Jiangsu, Shiinaha
Madal wiishka guurguura
H Nooca Mashiinka Saxaafadda, Afar-Column Haydarooliga Haydarooliga, 260t C Nooca Single Point Punch Machine, 25t Mashiinka Saxaafadda, 35t Mashiinka Saxaafadda, Mashiinka Press Servo,